Tun Tun's Photo Diary: Toy collections
တချို.အရမ်း crazy ဖြစ်တဲ့ သူဆိုရင် ဒီလိုအရုပ်တွေကို ၀ယ်ပြီးစုတာတွေရှိတယ်။ တချို. ဆိုရင် စုထားပြီး နောင် ရှားပါးပစ္စည်းဖြစ်မှ ပြန်ရောင်းလို. အမြတ်တောင်ရတယ် ဆိုပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ပိုက်ဆံ ပေါရင် ဒီလို အရုပ်လေးတွေ ၀ယ်ပြီး ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ချင်တယ်။
at 4/20/2016 10:34:00 PM